ANPING SHIHENG CHEMA ZVINOGONESESA CO., LTD
Nhare mbozha / Wechat: 0086 18631859989/0086 18617909888
Furo Neck Chishongo
Plastiki Cervical Collar
Ruoko Kuvhiya Nhevedzano
Aluminium Chigunwe Chidimbu
Medical Chiuno chibooreso
Sport Chiuno chibooreso
Kugadzirisa Dumbu Bhandi
Medical Knee chibooreso
Sport Knee chibooreso
Kuzvidziisa Kwese Series
Nzira yekusarudza gokora brace?
Kutanga, ngatitaurei nezvekuti chii chakasungirirwa brace ndeye brace mhando yesimbi yakaiswa kunze kwemuviri kudzora kumwe kufamba kwemuviri, nekudaro kubatsira mhedzisiro yekurapa kwekuvhiya, kana kushandiswa chaiko kwekugadziriswa kwekunze kwekusarapa kurapwa. Panguva imwecheteyo, kuwedzera kumanikidza poin ...
Kushandiswa kwemabhonzo emabvi
ne admin pane 21-06-19
Knee brace imhando yekudzivirira inodzivirira giya. Kuitira kudzivirira varwere mushure mekuvhiyiwa kwemabvi kubva pakuiswa purasita rinorema uye risingapinde mhepo, bhureti yemabvi yakanyatsogadzirirwa varwere mushure mekuvhiyiwa mabvi. Angle inogadziriswa mabvi brace. Ibvi rekusimbisa bhureti nderekatego ...
Chii chinonzi zvigunwe zvemunwe?
Chigunwe chemunwe chinoshandiswa kuchengetedza chigunwe chakakuvara. Basa rayo guru kuchengetedza chigunwe uye kudzora chigunwe kubva pakukombama. Uye zvakare, inogona zvakare kubatsira munwe kuti upore mushure meArthritis, kuvhiyiwa, kuvhiyiwa, nezvimwewo, kana zvimwe zvikonzero. . Chakagadzirwa zvigunwe zvigunwe zvinowanzo ...
Kukosha kwechiuno chekusunga
ne admin pane 21-06-12
Kune mhando dzakawanda dzechiuno chekusunga, uye iwe unofanirwa kufunga zvaunoda paunenge uchizvisarudza, wozviongorora kubva pane anotevera mapoinzi. 1. Icho chinangwa chekudzivirira kune iyo lumbar musana kana hudyu? Yekutanga inoda kutenga chiuno chakakwirira chevarindi, iyo yekupedzisira inoda kutenga yakaderera chiuno gadhi. Patien ...
Iwe unoshandisa nhumbu dumbu rekutsigira bhandi here?
Basa renhumbu rine dumbu rekutsigira bhandi rinonyanya kubatsira vakadzi vane nhumbu kusimudza mudumbu. Inopa rubatsiro kune avo vanonzwa kuti dumbu rakakura uye rinoda kubata dumbu nemaoko avo pavanenge vachifamba, kunyanya kana marunda anobatanidza chiuno akasununguka. Zve p ...
Kukosha kwemabvi brace
ne admin pane 21-06-05
Knee pads zvinoreva chinhu chinoshandiswa kuchengetedza mabvi evanhu. Iyo ine mashandiro ekudzivirirwa kwemitambo, kudzivirirwa kwechando uye kudziya, uye kubatana kwekubatana. Iyo yakakamurwa kuita mitambo mabheji mapads uye hutano mabvi mapedhi. Iyo inokodzera vatambi, vepakati-vakuru uye vanhu vakura, uye varwere vane k ...
Ndeipi basa repatatu bhandeji?
Triangle mabhandeji anoita kunge anoonekwa kazhinji muhupenyu hwedu, asi usazvidzikisira iwo mativi matatu. Basa rayo mune rekurapa harifanirwe kurerutswa. Bhandeji retatu rinonyanya kushandiswa kuchengetedza maronda uye kugadzirisa makumbo akakuvara. Kana zvichidikanwa, inofanira kuitwa nemabhandeji ...
Cherekedza izvi paunenge uchishandisa chibooreso
Zviratidzo zvegokora brace: Iko kumisidzana kwemashure uye epamberi mitsipa yemubatanidzwa wegokora. Elbow joint kusunungura uye arthritis mushure mekuvhiyiwa kana kutyoka. Kuchengetedza kwekuchengetedza kwegokora mubatanidzwa uye yakapfava nyama kukuvara uye kudzivirira kwechibvumirano. Iyo yepasi pa ...
Iko kusungirirwa kwemabvi chimiro chakabatana chiri padyo nemamiriro emuviri wemunhu uye chinogona kusungirirwa padhuze nehunhu hwevanhu kuti ibudirire uye ive nyore. Chuck nekona inochinjika, inogona kugadziridzwa kune akasiyana makona zvinoenderana nezvinodiwa ...
Nhanganyaya yemuromo wechibereko
Iyo yemumuromo collar chinhu chekubatsira kurapwa chishandiso checervical spondylosis, iyo inogona kuputsa uye kuchengetedza iyo yemumuromo vertebrae, kudzikisira kusakara kwetsinga, kuderedza kushungurudzika kwekuita kweanopindirana mitezo, uye kunobatsira kudzokorodza kwetishu edema uye conso ...
Kero: Paihuai Development Zone, Anping County, Hebei Dunhu
Runhare: 0086 0318-7591119